Creative USB Cigarette Lighter & Mobile Phone Bracket - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မပါ ၀ ယ်ပါ WoopShop®
အရောင် ငွေရေခဲ ရောင်စုံရေခဲ ကော်ဖီရေခဲ ရေခဲအပြာ ရေခဲနက် ရွှေရေခဲ အနက်ရောင်ပွတ်တိုက်
ငွေရေခဲ ရောင်စုံရေခဲ ကော်ဖီရေခဲ ရေခဲအပြာ ရေခဲနက် ရွှေရေခဲ အနက်ရောင်ပွတ်တိုက်
တီထွင်ဖန်တီးထားသော USB Cigarette Lighter & Mobile Phone Bracket - Silver ice backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပုံစံ: USB ပိုမိုပေါ့ပါးသည်
အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီစွမ်းအား ဓာတ်ငွေ့ / လောင်စာမလိုအပ်ပါ။
၎င်းကို USB slot ဖြင့်အားသွင်းနိုင်သဖြင့်မည်သည့်လောင်စာဆီကိုမျှဖြည့်ရန်မလိုပါ။ ၎င်းသည်မီးတောက်များ၊ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားမှုမရှိပါ။
မှာယူနီဖောင်းတစ်ချပ်မှာတစ်ချိန်တည်းမှာယူထားလိုက်သည်။ Спасибопродавцу, заказпришелвотличноесостояние Подарокбудитхорошим, надеюсь။
Всёотличноработает !!! Приклеилкчехлу။ Держитсяотлично။ မျက်နှာပြင်чехлаобработанспиртомпередприклееваниемкчехлу။ Товаромдоволен !!! Продавцуреспект !!!
ချစ်ခြင်းမေတ္တာချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ဤအမှုအရာတို့ကိုချစ် & လူတိုင်းကမနာလိုဖြစ်ပါသည် & တ ဦး တည်းလိုသည်
လေစွမ်းအင်ပိုမိုပေါ့ပါးသည့်အတွက်လေအဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန် usb peel stick နှင့်အားသွင်း။ မီးခိုးများအားအမြဲတမ်းဆုံးရှုံးနေသည့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ဆေးလိပ်သောက်ရန်လိုအပ်သည်။